दुई तिहाईको नचाहिँदो कदम ! | Sindhuli Saugat
दुई तिहाईको नचाहिँदो कदम !
सम्पादकीय २०७५ मंसिर १७ गते सोमवार सिन्धुली
देशमा दोश्रो पटक दुई तिहाई सहित बहुमतको सरकार नेतृत्वमा पुग्दा नेपाली जनताले धेरै विश्वास र अपेक्षा गरेका थिए । तत्कालिन माओवादी केन्द्र्र र नेकपा एमालेको गठबन्धन र एकताले सरकार बलियो र शक्तिशालि बनेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले शुरूवाति दिनहरूमा सिन्डिकेट तोड्ने प्रयासलाई जनताले सकारात्मक शुरुवातको संज्ञा दिएका थिए । जनताले सरकारको कदमको प्रशंसा गरेका थिए । तर, सरकारले सिन्डिकेटको मुद्धालाई अलपत्र छोडेर विगतको नेतृत्वकै झल्को दिएको छ । दीर्घकालिन योजना र दुरदर्शिताको अभावका कारण सरकारले सकारात्मक कदमलाई पुर्णता दिन चुकिरहेको अवस्था छ । केपि ओलिले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रि हुँदा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दिमा राष्ट्रवादिका नारा लगाएर जनताका विश्वासिला पात्र बनेका ओलि अहिले भने आलोचनाका मुख्य पात्र भएका छन् । सरकार सम्हालेको शुरुवाति दिनमा प्रतिपक्षि दलले मुलुकमा कम्युनिष्ट शासन भित्रिने र अधिनायकवाद र तानाशाहि प्रवृद्धि हाबि हुने भन्दा डटेर प्रतिवाद गरेको ओली सरकारले अहिले प्रतिपक्षिले भनेजस्तै व्यवहार देखाएको विश्लेषण हुन थालेको छ । संचारक्षेत्र लगायत नागरिकको स्वतन्त्र बोल्ने अधिकारलाईनै ओली सरकारले अंकुश लाउन खोजेको थुप्र्रै घट्नाहरु सार्वजनिक भएका छन् ।
ओली सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुको व्यवहार र शैलि पनि विवादास्पद देखिदैँ आएको छ । राष्ट्रपतिको १८ करोडको गाडी खरिदको विषयमा संचार तथा सूचना प्र्रविधिमन्त्री गोकुल बा्रस्कोटाले दिएको टिप्पणीले नै सरकार जनताप्रति बफादार नभएको देखिन्छ । बास्कोटाले ‘‘के अब राष्ट्रपतिले साइकल नै चढ्नु पर्ने हो’’ भन्ने जस्तो तल्लो स्तरका जवाफ दिएर जनतालाईनै मन्त्रीले अपमान गरेका छन् । तसर्थ, दुई तिहाईको सरकारले समृद्धिको नारा लगाएर आफुखुशी चल्ने प्रवृद्धिको अन्त्य गर्दै जवाफदेहि हुन आवश्यक छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा सरकारले देखाएको बढ्दो सक्रियताले पनि ओली सरकार आलोचित बनेको छ । धर्म प्रचारलाई मुख्य मुद्धा बनाएका आयोजकसँग नजिक रहेर जनतालाई नै सास्ती दिने नियम लागु गर्दा सरकारको तानाशाहि प्रवृद्धि अवश्य पनि देखिएको छ । तसर्थ, ओली सरकारले देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ र आलोचनालाई सुधर्ने अवसरका रुपमा लिनुपर्छ । विरोधिलाई व्यंग्यात्मक तरिकाले प्रहार गरेर आफू बच्ने काममा सरकार लाग्नुहुदैँन । अतः ओली सरकार जनमुखी र जनप्रेमि हुन जरुरी छ ।
पछिल्लाे - श्रीमान् गुमाएकी खत्रीलाई पाँच लाख प्रदान
अघिल्लाे - ‘दि ब्रेकअप’को दोस्रो गीत सार्वजनिक (भिडियो)